मान्छेको छालाको रंग किन भिन्न भिन्नै हुन्छ ? – Nepalpostkhabar
मान्छेको छालाको रंग किन भिन्न भिन्नै हुन्छ ?
Hemant KC । १८ बैशाख २०७७, बिहीबार १७:३६ मा प्रकाशित
सबैको छालाको रंग एउटै भए कति जाति हुन्थ्यो होला हगि ? कम्तिमा छालाको रंगकै आधारमा मानिस–मानिस बीच भेदभाव त हुने थिएन होला । यो त मीठो कल्पनाको कुरा भयो, व्यवहारमा यस्तो सम्भव हुँदैन ।
आखिर मान्छेको छालाको रंग किन यसरी भिन्नाभिन्नै भएको होला रु किन मानिसहरुको छालाको रंग एकै नभएको होला ?
मानिसको छालाको रंग कस्तो हुने भन्ने कुरा उसको शरीर र छालामा हुने रासायनिक प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ । वास्तवमा, हाम्रा छालाका तन्तुहरुमा रंगका निश्चित आधारहरु हुन्छन्, जसलाई अजचयmयनभलक भनिन्छ । रोचक के छ भने, यो क्रोमोजेन आफैंमा चाहिँ रंगहीन हुन्छ । जब निश्चित फर्मेन्ट्स वा इन्जाइम हरुको यी रंगका बेस एउटा खास रसायन हरुसँग प्रतिक्रिया हुन्छ, तब हाम्रो छालाको निश्चित रंग निर्धारण हुन्छ । बेस भनेको त्यस्तो रसायन हो जसले अम्ल सँग प्रतिक्रिया गरेर लवण कबति र पानी निकाल्दछ ।
जब कुनै कारणले मानिसको छालाको निश्चित भागमा वा पूरै छालामा त्यस्ता रंग–बेसहरु हुँदैनन् वा त्यससँग कुनै कारणले इन्जाइम वा फर्मेन्ट्सहरुको प्रतिक्रिया हुँदैन, त्यस अवस्थामा मान्छेको छालाको रंग पूरै सेतो हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई दुबी आएको भनिन्छ । यो संसारको जुनसुकै भागको मानिसलाई पनि हुन सक्छ । उदाहरणको लागि, सामान्यतः छाला अति कालो हुने दक्षिण अफ्रिकाको मानिसलाई समेत यो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मानिसको छाला गोरोभन्दा गोरो मानिसको छालाभन्दा पनि सेतो हुन्छ ।
त्यसो त रंग–बेसबिना नै पनि छालाको रंग सामान्यतः खैरो–सेतो रंगको हुन्छ । अझ छालामा हुने पहेलो पिग्मेन्ट ले यसलाई पहेलो पहेलो रंग प्रदान गर्छ । छालामा नै पहेंलोबाहेक अर्को कालो रंगको पिग्मेन्ट पनि हुन्छ, जसलाई मेलानिन भनिन्छ । यो पिग्मेन्ट आफैंमा पूर्ण कालो रंगको हुँदैन तर जब एकैठाउँमा यो पिग्मेन्ट बढी जम्मा हुन्छ, त्यस अवस्थामा छालाको रंग कालो देखिन्छ ।
त्यसो त घामको किरणले हाम्रो छालामा मेलानिन उत्पन्न गराउँदछ । यही नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा बढी घाम लाग्ने ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको छालाको रंग कालो हुन्छ । घाममा बढी काम गर्ने मानिसहरुको छाला डढ्यो भन्नु पनि यही मेलानिन बढी पैदारसक्रिय भएकै कारणले गर्दा हो ।
किन हामी सबैको छालाको रंग एउटै हुँदैन त रु यो प्रश्न हाम्रो मनमा उठ्नु स्वभाविक नै हो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार, हामो छालाको रंग फरक फरक हुनुको मुख्य कारण हाम्रो शरीरको छालामा भइरहने विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाहरु नै हुन् । हाम्रो छालामा “क्रोमोजिन” नामक तत्त्व हुन्छ । यसको आफनो कुनै रंग हुँदैन । तर यो अरु रसायनहरु सँग मिल्यो भने यसले विशेष रंगको निर्माण गर्छ । यसरी नै हाम्रो छालाको रंग पनि निर्माण हुने गर्छ । यदी कुनै मानिसमा यो तत्व नै छैन भने त्यस्तो मानिसलाई “अल्बिनो” भनिन्छ । त्यस्तो मानिसको छालको रंग अति नै सेतो हुने गर्छ । यस्ता मानिसहरु संसारको कुनै पनि भागमा हुन सक्छन् । अफ्रिकामा रहेका अल्बिनोहरु यूरोपका गोरा मानिसहरु भन्दा पनि सेता हुने गर्छन् ।
हाम्रो छालाको वास्तविक रंग क्रिम जस्तो सेतो हुने गर्छ । तर क्रोमोजिनको कारणले हाम्रो छाला अलिक पहेलो देखिने गर्छ । हाम्रो छालाको रंग कालो पनि हुने गर्छ । यसको कारण भने हाम्रो छालामा रहेको मेलानिन नामक तत्त्व हो । यो मेलानिनलाई हाम्रो शरीरका ६ वटा जीनहरुले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । मानिस कालो होस् या गोरो होस्, उसको शरीरमा अनिवार्य रुपमा त्यो मेलानिन हुन्छ ।
हाम्रो छालाको वास्तविक रंग क्रिम जस्तो सेतो हुने गर्छ । तर क्रोमोजिनको कारणले हाम्रो छाला अलिक पहेलो देखिने गर्छ । हाम्रो छालाको रंग कालो पनि हुने गर्छ । यसको कारण भने हाम्रो छालामा रहेको मेलानिन नामक तत्त्व हो । यो मेलानिनलाई हाम्रो शरीरका ६ वटा जीनहरुले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । मानिस कालो होस् या गोरो होस्, उसको शरीरमा अनिवार्य रुपमा त्यो मेलानिन हुन्छ । मेलानिन पनि मूलतः दुई थरिका हुन्छन् । तीमध्ये पहिलो थरि फियोमेलानिन रातोदेखि पहिलो रंगको हुन्छ भने दोस्रो इयुमेलानिन चाहिँ गाढा कलेजीदेखि को हुने गर्छ । गोरा छाला हुने मानिसहरुमा फियोमेलानिन बढी सक्रिय हुने गर्छ भने कालो छाला हुनेहरुमा चाहिँ इयुमेलानिन । गोरामध्ये पनि कोही ठिक्कको र कोही चाहिँ अति गोरो हुनु वा कालामध्ये पनि कोही निख्खर कालो र कोही चाहिँ कलेजी कालो हुनुको पछाडि पनि तिनको शरीरमा मेलानिन कति संख्यामा र कत्रो आकारमा उपस्थिति कति रहेको छ भन्ने कुराले नै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
छालाको रंगको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण पनि यिनै चार रंगहरु– सेतो, पहेलो, कालो र रातोले नै गर्छन् । यिनीहरु जुन अनुपातमा मिसिएका छन्, त्यही अनुसार नै हाम्रो छालाको रंग हुने गर्छ । विभिन्न जातीमा रहेका विभिन्न प्रकारका छालाको रंगहरु यिनै चार रंगहरुबाट निर्माण भएका हुन्छन् ।
कहिले काहीँ तापक्रमले पनि छालो रंगमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि जाडोमा हाम्रो छालाको रंग पहेँलो र गर्मीमा रातो हुन्छ । यही प्रक्रियाको मदतले मानिसको शरीरको तापक्रम नियन्त्रण हुन्छ ।